Majeerteen oo Cadaawad u beeray Ogaadeen iyo Mareexaan -kibir qooqa Kismaayo kala carar baa xigi doona?.
Majeerteen oo Cadaawad u beeray Ogaadeen iyo Mareexaan -kibir qooqa Kismaayo kala carar baa xigi doona!.
05 April 2013 Waagacusub.com-Somalidu waxay ku maahmaahdaa qofaan kuu rari doonin yaanu kuu dhaamin,tani waxaan kaga socdaa ololaha Faroole ,Cumar Cabdi Rashiid,Morgan,Juriile iyo Cabdi Wali Gaas oo u dhashay beesha Majeerteen ku halaagayaan beelaha Mareexaan iyo Ogaadeen. Jubooyinka waxaa dega 36 beelood oo lix ka mida tahay Daarood sida ku cad Dukumintigii gudiggii UNISOM ee Jeneral Liiqliiqato u ahaa madaxda .
Sida muuqato inta badan beesha Mareexaan waxay fahmeen dhagarta Siyaasiyiinta Majeerteen ugu abuurayaan Cadaawada fog kuna xumeeynayaan xiriirka kala dhaxeeya beelaha la dega ee Soomaaliyeed hasse yeeshee Ogaadeen ayey run la tahay riyo maalmeedka Siyaasiyiinta ka soo jeeda Puntland.
Xaqiiqadu waxay tahay in Kibir qooqa Kismaayo ka socda ee Ahmed Madoobe horboodayo Kala carar iyo xeradii Kitaango xigi doonta maxaa yeelay Kakuuyada Kenya ee huwan magaca Amisom maalin gelinkeed ma difaaci karto Kismaayo hadii xaaladu gaarto habar wacasho qabiil.
Waa hubaal in Siyaasiyiinta Majeerteen ku laaban doonaan Puntland balse intaan ku dheeraan ararteeyda aan guda galo aragtida fog ee Mustaqbalka dhaw iyo Jubooyinka iyo sida uu noqon doono aayaha.
Waxaa Magaalada Kismaayo ee Jubadda hoose gaaray Xildhibaano gaaraya 44, xildhibaanadaas oo isugu jira Xildhibaano uu horboodayo Cismaan Jurile iyo Xildhibaano kale oo sheegay inay dhex dhexaadinayaan Dawladda iyo Kooxda Kaanbooniyiinta ee Maamusha Magaalada Kismaayo.
Xildhibaanada uu horboodayo Cismaan Jurile uuna kamidka yahay Cabdirashiid Xidig ayaa shirka ka sheegay inay u yimideen Kismaayo inay u hanbalyeeyaan shirka us socda kooxaha isugu yimid Magaalada Kismaayo halka qaar kamid ah Xildhibaanada kalana ay sheegeen inay Kismaayo u yimideen inay Dawladda iyo Kaanbooniyiinta dhexdhexaadiyaan.
Xildhibaanada tagay Kismaayo ayaa qaban qaabiyayaasha shirka doonayaan oo kaliya in caalamka loo sheego in shirka ay Dawladii Soomaaliyeed ka soo qeyb galeen, weliba tiro aad u culus, xildhibaanadaan ayaa diyaarada, nolosha iyo xoogaa jeeb gashi ah loo balan qaaday si ay Kismaayo u tagaan, Xildhibaanada ayaa isugu jira qaar shirka u taageersan qabiilnimo oo ay horboodayaan Jurile iyo Xidig, Halka qaarka kalana ay Yihiin Xildhibaanada loogu magac daray “Fadlan ku shubo” Xildhibaanaad oo ah kuwo caan ka ah Magaalada Muqdisho.
Xildhibaanada u dhaartay inay Danta dalka iyo Diinta ilaalinayaan ayaa qaarkood ka leexday dhaartii ay u dhaarteen Qaranka Soomaaliyeed, Xildhibaan Jurile iyo Cabdirashiid Xidig iyo inta ku fikirka ah ayaa lagu tilmaami karaa inay sameeyeen Qiyaamo Qaran, Maadaama ay si bareer ah u taageereen shir la diiday in Dawladda Soomaaliyeed maamulkeeda looga danbeeyo.
Xildhibaanadaan taageeray arin lid ku ah sharafta, Madax banaanida qaranimada Soomaaliyeed ayaa qabiiliyan taageersan in Maamul la mid ah kan Puntlan laga dhiso Gobolada Jubooyinka iyo Gedo, Goboladaas oo in badan oo ka mid ah gacanta ugu jira Xarakada Shabaab, waxya alaha shirka loo boobsiinayo oo loo diidan yahay in la sugo dhulka la sheegay in Maamulka loo samaynayo inta laga xoreynayo ayaa ah qolada hadda shirka gacanta ku haysa oo aaminsan in qorshahoodu uusan fuleynin.
Yaa u fududeynaya qorshe aysan Dawladda Soomaaliyeed wadin inuu Xawligaasi ku socdo
Qorshahaan waxaa fudueynaya Ciidamada AMISOM ee ku sugan Kismaayo ciidamadaas oo ka socda wadanka Kenya, qorshahaan ayaa waxaa horey u waday ururka IGAD qeyb qaabilsan Maamul samaynta iyo dib u heshiisiinta, Xafiiskaas waxaa Gudoomiye ka ah nin Lagu Magacaabo Maxbuub oo qaraabo dhow la ah Gudoomiyaha Kaanbooniyiinta Ahmed Madoobe, kadib dadaal weyn oo ay samaysay Dawladda Soomaaliya waxaa midawga Afrika isku raacay in arrimaha gudaha Soomaaliya loo daayo Dawladda Soomaaliya, go’aankaas Kadib hawshaan oo ay wada fulinayeen UNOPS iyo IGAD waxaa maalgeliyayaashii maalgelinayay qorshahaan sheegeen in Xafiiska UNOPs-na loo bedelaya UN Mission for Somalia, halka Xafiiska Maamul samaynta IGAD la sheegay in isaga la xirayo bisha April dhamaadkeeda.
Maalgeliyayaasha maalgelinaya xafiiska oo inta badan kasoo jeeda Dawladdo sheegay inay aqoonsadeen dawladda Soomaaliya, Xafiiska uu hogaamiyo UNOPs iyo Wadamada ku Bahoobay IGAD iyo Midawga Afrika ayaan ka qaadan doorkii dalka Soomaaliya xaqa ugu lahaa oo ah inay si buuxda ula shaqeeyaan Dawladda Soomaaliya, Waxaad moodaa in uu jiro heshiis hoose oo ah ka gaarsiiya oo Maamul Jubaland la dhaho ku dhawaaqa inta aan Xafiiska UNOPs-na isku bedelin UN Mission, Xafiiska Maamul samaynta iyo dib u heshiisiintana aan irdaha loo laabin.
Waa halkee Halka Caqabadu u Taalo Dawladda Soomaaliya= Golaha Amaanka Afrika??
Meeshu Dawlada Soomaaliya Caqabadu ka haysato ayaa ah Golaha Amaanka Afrika oo Fadhigoodu yahay Magaalada Addisababa, Golahaas waxuu ka kooban yahay, xubnaha golaha xiligaan waxay ka kooban yihiin Angola, Egypt, Guinea, Cameroon, Cote d’ Ivoire, Congo Republic, Libya, Equatorial Guinea, Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Tanzania, Djibouti, Gambia iyo Benin, Waxaa hadda Gudoomiye u ah guddigaasi Madaxweynaha Benin's President Yayi Boni.
Golahaan Amaanka Afrika ayaa Maamula Ciidamada AMISOM ee ku sugan Dalka Soomaaliya, dawladda Soomaaliya ayaa waxaa ay ku guul daraysatay in Golahaan ka dhaadhiciso in Ciidamada AMISOM ay ka talo qaataan Dawladda Soomaaliya, dawladda ayaa laga rabay inay caalamka Gaarsiiso inay si cad ugu sheegto in Guddigii Amaanka Afrika uu ciidamadii uu usoo diray Soomaaliya ay samaynayaan waxyaabo aysan dawladu ogeyn ama kaba soo horjeeda Dawladda, ficiladaas oo ah Ficilo dhaawacaya qaranimada Soomaaliya.
Golaha Amaanka Afrika ma ahayn waxyaalihii Loo aasaasay inay Farageliyaan Dal ka mid ah Midawga Afrika, ama Ciidamada AMISOM ay gobolo ku wareejiyaan Kooxo ay iyagu wataan, ka aamusnaanta Soomaaliya xili faraha lagula jiro qaranimada Soomaaliya ayaa muujinaysa Laciiftinimada Haatan haysata Madaxda Dawladda Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa ka gaabisay inay ka dhaadhiciso faragelinta Ciidamada AMISOM gaar ahaan Kenya ku hayaan arimaha Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah golaha Amaanka Afrika oo ka kooban 15-ka dawladood . Dawladda Kenya ayaa iyadu xubin ka ah Golaha Amaanka Afrika ayaa ku guuleysatay in Kismaayo ay ku wareejiso Jabhad lagu Magacaabo Kaanbooniyiinta, Jabhadaas oo Dekedii iyo Garoonkii Diyaaradaha Kismaayo ay gacanta u gelisay. Dawladda Jabuuti oo xubin ka ah Golaha Amaanka Afrika ayaa ku guuldareysatay inay Difaacdo qaranimada iyo Madaxbanaanida Dalka Soomaaliya.
Maxay tahay waxyaalaha Dawladda Soomaaliya looga hor istaagayo Maamul u samaynta Kismaayo?
Dawladda Kenya iyo dawlado qorshaha la wada ayaa cuskanaya in Mandate-ka AMISOM yahay in Alshabaab la dagaalamaan kana saaraan gobolada Jubooyinka, arinta Kismaayo ka jirtana ay tahay Xaqiiqo gudaha ka jirta, iyagana aysan masuuliyadooda ahayn in ay soomaalida u kala Hiiliyaan.
Arintaas oo ah arin ay sameeyeenba Ciidamada Kenya, Ciidamadii Dawladda ee lagu soo tababaray Kenya waxaa loo kala soocay qabiilo, ciidankii ka soo jeeday Beesha Ogaadeen waxaa lagu wareejiyey Jabhadda Kaanbooniyiinta, ciidamadii kale ee ka soo jeeday Beelaha Mariixaan, Gare iyo Digil iyo Mirifle waxaa lagu jiheeyay dhinaca Faafaxdhuun iyo Baardheere, Ciidankii ka soo jeeday Ogaadeenka waxaa lagu wareejiyey Magaalada Kismaayo Dekedeeda iyo Garoonkeeda, Halka ciidamadii kale la joojiyey Faafaxdhuun lagana hor istaagay inay hore u dhaqaaqaan.
Muxuu Yahay Qorshaha Kenya iyo Dawladaha la wadaahi doonayaan?
Qorshaha ayaa ah inaan Goboladaas aan la wada xoreyn inta ay sidaa u kala xiran yihiina lagu dhawaaqo Maamul loogu magac daray Jubaland, maadaama hadii goboladaas la xoreeyana la og yahay in ciidamo badan oo kasoo kala jeeda Jubadda Hoose, Jubadda Dhexe iyo Gedo ay isugu imaanayaan Magaalada Dekeda leh ee Kismaayo. Marka ay taasi dhacdana aysan suuragal Noqonaynin in qorshaha Jubaland ee la doonayo in Dawlada Soomaaliya loogu dhigo caqabad ah sida Maamulada Somaliland iyo Puntland , Maamuladaas labada ah oo aysan hadda maamulin Dawladda Soomaaliya, Gacantana ku haaya laba ka mid ah dekedaha Soomaaliya in lagu Sadexeeyo Maamulka Jubaland oo isna la doonayo in Gacanta loo geliyo Dekedda Kismaayo.
Dalka Soomaaliya oo gebi ahaanba leh 4 dekedood ayaa la doonayaa inay ka samaysanto 3 Maamul oo sheeganaya Dawladnimo, Madaxweynayaal, Wasiiro, Dastuuro, maamuladaas ama Dawladahaas oo ladoonayo in lagu wiiqo sharcinimada ama Matalaada ay dawladda Soomaaliya metesho guud ahaan Dalka Soomaaliya.
Muxuu Yahay Hal qabsiga Shirkaan Cajiibka ah, (slogan-ka)
Hal qabsiga shirka ayaa ah “talada Jubaland waxaa iska leh shacabka, qof alaale qofkii ay iyagu doortaan ayaana xukumaya” “Dalka Soomaaliya wuxuu qaatay Dastuur Federaal ah mana ahan in dawladu soo farageliso Gobolada wax dhisanaaya oo ka mid noqonaya Federaalka Soomaaliya”
Federaalka Dastuurka ku Qoran waa mid caynkee ah:
Federaalka ku qoran Soomaaliya ayaa ah mid uun lagu cadeeyey in Dalka Soomaaliya uu qaatay Federaal, Labo gobol iyo wixii ka badana ay noqon doonaan Dawlad ka mid ah Federaalka Soomaaliya.
Ma jirto wax cadeynaya sida Federaalku u dhismayo, sidoo kale ma jirto meel cadaynaysa sida ay u wada shaqeynayaan Dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Dawlad goboleedya ka mid noqonaya Federaalka Soomaaliya.
Dastuurka ayaa loo qoray qaab ah in Dawladda Soomaaliya uun ay maamusho Magaalada Muqdisho, ilaha Dhaqaalaha Dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyana ay noqdaan Daqliga ka soo baxa Dekedda Muqdisho iyo Garoonka Muqdisho, iyo sidoo kale Mucaawinada Caalamka ugu deeqo Soomaaliya marka qeyb la siiyo Somaliland, qeyb Kalana la siiyo Puntland, qeyb kalan hadda la doonayo in loo sameeyo Maamul beenaadka Jubaland, inta soo hartana ay ka dhaxayso Soomaaliya oo dhan.
Xildhibaanada, Wasiiradda, Safiirada iyo Dhamaan xubnaha sarsare ee Dawladda ayaa ka kooban dhamaan Soomaalida wax ku qeybsada hanaanka qabiilka ee 4.5.
Xildhibaanada kamid ah Baarlamaanka laakiin ka shaqeynaya burburinta Qaranka Soomaaliya sida Cismaan Jurile, Cabdirashiid Xidig ayaa doonaya in mushaharkooda u doontaan Muqdisho, Dawladda Soomaaliyeed in ay Dalka maamushana ka horjoogsadaan.
Haddii Dalku lahado dawlado wata magacyada Somaliland, Puntland, Galmudugland, Jubaland, iyo land land kale oo wadada kusoo jirta, Dawladahaas oo aysanba jirin wax kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya, Madaxweynayaashooda , wasiiradooda, Xildhibaanadooda, dastuurkooda leh sidee loo helayaa Dawlad Soomaaliyeed oo shaqeysa.
Dawladda Soomaaliya ma guuleysan kartaa iyada oo ay hortaagan yihiin caqabadaha aan kor kusoo sheegnay??
Dawladu Ma guuleysan Kartaa iyada oo ay sharci dejiyayaal u yihiin Xildhibaanada maanta tegay Kismaayo oo hanbalyaynaya inaysan shaqeynin Dawladda ay xildhibaanada u yihiin?? Iyaga oo fiiriniya Dano qabiil!! Qaranimada Soomaaliyeedna ay kala weyn tahay wax loo ekeysiiyay Dan qabiil, balse ah Qabiil Soomaaliyeed oo isu diidaya qaranimada, Karaamada iyo Sharafta Dal leeyahay!!!
Dawladda Soomaaliyeed Ma guuleysan kartaa inta aysan ku dhiiran karin in Baarlamaanku saxo Dastuurka, kana dhigo Dhastuur shaqeyn kara.. Dastuur ilaalinaya qaranimada iyo midnimada Soomaaliya..
Dawladda Soomaaliya ma Guuleysan kartaa inta Xildhibaano u yihiin, xildhibaano ka shaqeynaya baabi’inta qaranimada Soomaaliya??
Dawladda Soomaaliya ma guuleysan Kartaa in ciidamadeeda lagu soo tababarayo wadamo shisheeye, inta ciidamadeeda AMISOM gobol kasta ku tababarayso ciidan qabiil, inta Taliyayaasha ciidamadu yihiin taliyayaal qabiil, ciidanka ay xukumaana yihiin ciidan aan amar qaadan, inta saraakiisha iyo ciidanku mushahar qaadanaynin.
Dawladda Soomaaliya ma guuleysan kartaa inta Ciidamada Booliiska, Milatariga, Nabadusgida, Asluubta aysan ahayn tiro la yaqaano, ciidanku aqoonsi lahayn, ciidanku xeryo lahayn, Ciidanka dawladda Soomaaliya iyo Ciidanka Madaxda dawladda u shaqeysa min Madaxweyne ilaa Gudoomiye Xaafad ay ciidamo iyaga u gaar ah leeyihiin, Ciidanka dawladda waxa lagu aqoonsado ay tahay inuu ama Tuute wato ama la yaqaano??
Dawladda Soomaaliya ma guuleysanaysaa inta Booliskeeda UNDP ay lacagta siiso uu yahay mid aan shaqeyn, jirin, shaqo qaban, lala xisaabtamin, la dabagelin,
Dawladda Soomaaliyeed ma guuleysanaysaa inta wasaarad kastaahi wasiirka xukuma qabiilkiisa uun kaliya ay ka shaqeynayaan, shaqaalaha dawladda aan lagu qaadan aqoon, qaarkood mushahar ka qaataan 4 wasaaradood, ama qeybaha ciidamad kala duwan.
Dawladda Soomaaliya ma Guuleysanaysaa inta ilaha dhaqaalah ay maamulayaan dad aan aqoon lahayn, la xisaabtan lahayn, canshuuraha dawlada ay qaadaan
Dekadda: Markabka la soo rarto ninka uu u ijraana yahay, intii Manifestiga waxa saaran canshuurta lagu bixin lahaa, 5 meelood kala duwan lacago lagu qaadayo..
Jaadka soo dega Canshuurtiisa uu qaadayo Xildhibaan Xaaf, Taarkada Baabuurta, leysinka, Book-ga Baabuurka uu canshuurtiisa qaadanayo agaasime Dhagaxtuur,Gobolka ilaa degmo Canshuur qaadanayaan aan kala cadeyn.
Dawladu ma guuleysanaysaa inta Safiiro u yihiin Safiiro wadamada ay joogaan raali ka yihiin, aan la bedeli karin sida qaar aaminsan yihiin, shaqaalo u ah wadamada ay safiirada ka yihiin.
Dawladu ma guulaysanaysaa inta ay gurguuranayso, cabsanayso in qof xun xilka ka qaado, inta qofkii xil loo magacaabo uu isu bedelayo Madaxweyne yar, cid la xisaabtamaysana aysan jirin.